राष्ट्रियस्तरको भूकम्प अनुसन्धान केन्द्र बन्ने - मूल्याङ्कन अनलाइन
राम केसी | September 13, 2017
भदौ २८, चौतारा । राष्ट्रियस्तरमा भूकम्पसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने केन्द्रका रुपमा विकास गरिने लक्ष्यका साथ सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पस्मृति उद्यान निर्माण शुरु भएको छ ।
‘ए नट’ आर्किटेक डिजाइन एशोसियसनले रु. ३५ लाखमा तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले मंगलबार चौतारामा सार्वजनिक गरेको थियो । सदरमुकाम चौताराबाट करिब ३ किमी उत्तर पश्चिमको दाह्रे गौँडा डाँडामा निर्माण गरिने उक्त उद्यान वरिपरि बार लगाउने काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको रु. ३ करोड २५ लाखमा सडक, बत्तीलगायत काम अगाडि बढाइएको छ ।
भूकम्पसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सकिने बैठक कक्ष, पुस्तकालय, सूचना केन्द्र, विगतदेखि हालसम्म गएको भूकम्पको जानकारी लिन सकिने संग्रहालय र दुईतले दृश्यावलोकनस्तम्भ निर्माण गरिने छ । उद्यानभित्र मृतकको नामांकित शिलास्तम्भ र पार्किङलगायत व्यवस्था गरिने शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डा. युवराज पौडेलले जानकारी दिए । सो उद्यान निर्माणमा झण्डै रु. १ अर्ब बजेट लाग्ने छ । आगामी मंसिरसम्म डिपिआर तयार हुने बताइएको छ ।
‘गोरखा भूकम्प’ तथा त्यसपछिको परकम्पबाट जिल्लामा ३ हजार ५७२ जनाको मृत्यु भएको तथा ८ जना बेपत्ता र १ हजार ५६९ जना घाइते भएका थिए । त्यस्तै ९५ प्रतिशत भौतिक क्षति भएको थियो । देशभरमा भूकम्पबाट कम्तीमा ९ हजारको मृत्यु भएको थियो ।
« डिम्बाशय अर्बुदका लक्षण (Previous News)
(Next News) एड्स संक्रमित घट्दै »